Halyayga kooxda Manchester United Bryan Robson oo si weyn u taageeray Alexis Sanchez – Gool FM
Halyayga kooxda Manchester United Bryan Robson oo si weyn u taageeray Alexis Sanchez
Dajiye September 7, 2018
(Manchester) 07 Sab 2018. Kabtankii hore kooxda Manchester United Bryan Robson ayaa si weyn u taageeray laacibka reer Chile ee Alexis Sanchez, kadib markii uu hoos u dhac weyn ku yimid qaab ciyaareedkiisa tan iyo markii uu yimid garoonka Old Trafford.
Alexis Sanchez ayaa soo caga dhigtay kooxda Manchester United bishii January ee lasoo dhafay, kadib markii uu kaga soo biiray dhigeeda reer London ee Arsenal, laakiin 21 kulan uu ilaa iyo haatan ciyaaray wuxuu dhaliyay 3 gool oo kaliya.
Laakiin Bryan Robson ayaa wuxuu u arkaa in laacibkii hore kooxda Barcelona uu dib ugu heli doono awoodiisa ciyaareed garoonka Old Trafford xiliyada soo aadan.
“Alexis Sanchez waa ciyaaryahan heer sarre ah, lakiin ilaa iyo haatan ma uusan kusoo bandhigin qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa kadib imaatinkiisa kooxda Manchester United”.
Laakiin waan hubaa inuu gaari doono heerkiisa ugu sarreeya, laakiin mararka qaar waxay kugu qaadan kartaa waqti dheer si aad dib ugu hesho awoodaada ciyaareed”.
Griezmann oo ug dambeyn qirtay sida uu u adkaa go’aankii uu ku diiday ku biirista kooxd Barcelona
Difaaca Barcelona Jordi Alba oo ka warbixiyay kooxda uu doonayo inuu kaga fariisto kubada cagta